electric breast enlargement pump – MM Online Shopping
ရငျသားပွားခပျြနသေောသူတှေ ကိုယျဝနျတားဆေးသုံးသူတှေ ဟျောမုနျးဆေးသောကျသုံးသူတှေ အလှနျအမငျးဝိတျကပြီး ရငျသားမရှိသူတှေ အပွငျးအထနျဖြားခွငျးတို့ကွောငျရငျသားပုံစံပွောငျးလဲသူမြားကတော့ အမှနျတကယျ သုံးစှဲသငျ့သော electric breast enlargement massager လေးနဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ .
ရငျသားကငျြ့သောစုပျခှကျမြားကို ကျောဖွငျ့ပွုလုပျထားပွီးအနားသတျကို ရျောဘာကှငျးဖွဈ တပျထားသောကွောငျ့ လလေုံပွီး ရငျသားကို သကျတောငျ့သကျသာရှိစပွေီး သနျ့ရှငျးရတာလှယျကူစပေါတယျ ..
ရငျသားကိုကွီးစပွေီး ပုံစံတကစြသေညျ။ ရငျသားတှဲကမြူကို ပွနျလညျတငျးမာလာစပေီး ရငျသားတှငျရှိသော tissueမြားရဲ့ ဆနျ့ကြုံသတ်တိကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ
breast cup size (diax height) 4.5 *4.3 inch
လေ အပွငျကို မထှကျစရေနျအတှကျ ရငျသားနှငျ့စုပျခှကျကို ကှကျတိ နရောခထြားပေးပါ
remote တှငျAAဓာတျခဲ ၃လုံးထညျ့ပေးပါ ..
remote ဘေးတှငျ ခလုပျ ၂ခုရှိပါတယျ
အဝိုငျးနဲ့ခလုပျကွီးကို စနှိပျလိုကျတာနဲ့ စအလုပျလုပျပါပွီး
speed နညျးနညျးပိုပွငျးခငျြပါက ဘေးက တခွား ခလုပျ၁ခုကို နှိပျပွီး speed ကိုမွှငျ့လိုရပါတယျ .
လကေ့ငျြ့ပွီး ရပျလို့ပါက အဝိုငျးကို နှိပျပွီးတုနျခါတာကိုပိတျပေးပါ ထိုနောကျ remote ခလုပျဘေးက ဗားခလုပျကို နှိပျပွီး လလြှေော့ပေးပါ
စစခငျြး ၁၀ မိနဈနဲ့ မိမိခံနိုငျလောကျတဲ့ speedကနေ စကငျြ့ပေးပါ နောကျမှာ တဖွညျးဖွညျးခငျြး မိနဈရနေဲ့ speed ကိုတိုးပေးပါ
မှတျခကျြ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးမြား အသုံးမပွုရ ရငျသားပွောငျးကို မိမိ တဦးတညျးသုံးပါ တခွားလူမြားနှငျ့ မမြှဝရေ
ရငျသားအရပွေားကို ပွောငျးဖွငျ့ဆှဲစုပျပါက အရပွေားယောငျယမျးမူ ကိုကာကှယျရနျအတှကျ နို့သီးခေါငျးတှငျ cold cream အနညျးငယျလိမျးပေးပါလကျရှိအနအေထားကို တိုငျးတာပွီး ၁၀ ရကျ တခါ တိုးတကျမူကို ပွနျလညျ တိုငျးတာပေးပါ ။
ရင်သားပြားချပ်နေသောသူတွေ ကိုယ်ဝန်တားဆေးသုံးသူတွေ ဟော်မုန်းဆေးသောက်သုံးသူတွေ အလွန်အမင်းဝိတ်ကျပီး ရင်သားမရှိသူတွေ အပြင်းအထန်ဖျားခြင်းတို့ကြောင်ရင်သားပုံစံပြောင်းလဲသူများကတော့ အမှန်တကယ် သုံးစွဲသင့်သော electric breast enlargement massager လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ .
ရင်သားကျင့်သောစုပ်ခွက်များကို ကော်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအနားသတ်ကို ရော်ဘာကွင်းဖြစ် တပ်ထားသောကြောင့် လေလုံပြီး ရင်သားကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး သန့်ရှင်းရတာလွယ်ကူစေပါတယ် ..
ရင်သားကိုကြီးစေပြီး ပုံစံတကျစေသည်။ ရင်သားတွဲကျမူကို ပြန်လည်တင်းမာလာစေပီး ရင်သားတွင်ရှိသော tissueများရဲ့ ဆန့်ကျုံသတ္တိကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်
လေ အပြင်ကို မထွက်စေရန်အတွက် ရင်သားနှင့်စုပ်ခွက်ကို ကွက်တိ နေရာချထားပေးပါ
remote တွင်AAဓာတ်ခဲ ၃လုံးထည့်ပေးပါ ..
remote ဘေးတွင် ခလုပ် ၂ခုရှိပါတယ်
အ၀ိုင်းနဲ့ခလုပ်ကြီးကို စနှိပ်လိုက်တာနဲ့ စအလုပ်လုပ်ပါပြီး
speed နည်းနည်းပိုပြင်းချင်ပါက ဘေးက တခြား ခလုပ်၁ခုကို နှိပ်ပြီး speed ကိုမြှင့်လိုရပါတယ် .
လေ့ကျင့်ပြီး ရပ်လို့ပါက အ၀ိုင်းကို နှိပ်ပြီးတုန်ခါတာကိုပိတ်ပေးပါ ထိုနောက် remote ခလုပ်ဘေးက ဗားခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး လေလျှော့ပေးပါ
စစချင်း ၁၀ မိနစ်နဲ့ မိမိခံနိုင်လောက်တဲ့ speedကနေ စကျင့်ပေးပါ နောက်မှာ တဖြည်းဖြည်းချင်း မိနစ်ရေနဲ့ speed ကိုတိုးပေးပါ
မှတ်ချက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ အသုံးမပြုရ ရင်သားပြောင်းကို မိမိ တဦးတည်းသုံးပါ တခြားလူများနှင့် မမျှဝေရ
ရင်သားအရေပြားကို ပြောင်းဖြင့်ဆွဲစုပ်ပါက အရေပြားယောင်ယမ်းမူ ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် နို့သီးခေါင်းတွင် cold cream အနည်းငယ်လိမ်းပေးပါလက်ရှိအနေအထားကို တိုင်းတာပြီး ၁၀ ရက် တခါ တိုးတက်မူကို ပြန်လည် တိုင်းတာပေးပါ ။
Be the first to review “electric breast enlargement pump” Cancel reply